BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 3/23/20150အကြံပြုခြင်း
rဗိုလ်ချုပ် ခင်မောင်သန်း သမီး။ ဗိုလ်ချုပ် တင်ဦးသမီး။ ဗိုလ်ချုပ် နေဝင်းမြေး။ ဗိုလ်ချုပ် ထွန်းကြည် သမီး။ ဗိုလ်ချုပ် ခင်မောင်သန်း သမီး ( Hot News Journal ) ထုတ်ဝေသူ။
by Pan Pwint Phyu ·
ဒီနေ့ 23.32015 မုံရွာ ဗကသ ကျောင်းသား ကိုစိုးလှိုင် ရုံးထုတ်ပါတယ်....။
ဒီမိုကရေစီ ပညာရေး ဗကသ ပင်မ သပိတ်စစ်ကြောင်းပါဝင်သူ ကိုစိုးလှိုင်း မြင်းခြံဒီဂရီကောလိပ် အလံချပြီး ခွပ်ဒေါင်းအလံ လွှင့်တင်မှုနဲ့ပါ
ကိုသိန်းအောင်မြင့် အပါအဝင် လေးဦးကို အလုပ်ကြမ်းနှင့် ထောင်ဒဏ် ၆လ ချ
r၂၀၁၄ ခုနှစ်က ဒိုင်းမွန်း ပလာဇာရှေ့မှာ မီတာခ လျော့ချရေးအတွက် ဆန္ဒပြခဲ့ကျတဲ့အတွက် ချမ်းအေးသာဇံတရားရုံးက အမိန့်ချမှတ်လိုက်တာပါ။
ဖွတ်ပါတီကလက်မှတ်အတုထိုးပေးပြီး ပလပ်စတစ်ကဒ်ပါ လောင်းပေး
ဖွတ်ပါတီက အိမ်တိုင်ရာရောက် Door to Door မဲဆွယ်ရုံတင်မကဘဲ ပါတီဝင်အဖြစ်ပါ လုပ်ပေးနေပါတယ်…
ဒီကဒ်က လေးကို ကာယကံရှင် သ ဘောဆန္ဒမပါပဲ ကာယကံရှင် ကိုယ်တိုင်ပင် ဘာမှန်းညာမှန်းမသိလိုက်ပဲ ရပ်ကွတ် ကျေးရွာများမှာ တအိမ်တက်ဆင်း ဘာ ကြောင့်ဇွတ်အတင်းးလိုက် ဝေနေတာလဲ ?
ကဒ်၏ကျောဖက် အသင်းဝင်လက်မှတ် နေရာမှာ လက်မှတ်အတုထိုးပေးပြီး ပလပ်စတစ်ကဒ်ပါ လောင်းပေးလိုက် သေးတယ်…
တချို့ဒေသတွေမှာကျတော့ မှတ်ပုံတင်လုက်ပေးမယ်ဆိုပြီး ပတ်စပို့စ်ပုံတွေတောင်းတယ်…
ပြီးတော့ ကြံ့ဖွတ်ပါတီဝင်ကဒ်တွေ လုပ်ပေးနေပါတယ်…
အဲ့လိုတွေ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်လုပ်လာတာ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် တင်အေး ဘာလို့ငြိမ်နေတာလဲ…
NLD ပါတီတွေကို လုံးဝအတိမ်းအစောင်းမခံတဲ့ တင်အေး ဒါမျိုးကျတော့ ချမှတ်ထားတဲ့စည်းမျဉ်းတွေနဲ့ ဆန့်ကျင်နေတာကို မသိဟန်ဆောင်နေတာ ဘာသဘောလဲ တင်အေး!
ပြည်သူတွေရဲ့ ဆန္ဒမပါဘဲ လိမ်လည်ပြီး မဲရဖို့လုပ်ပေးတဲ့ ကြံ့ဖွတ်ကဒ်တွေကို လက်ဝယ်ရရှိသူထားသူများ မီးရှို့ဖျက်ဆီးပေးကြဖို့ ပြောချင်ပါတယ်…
အဲ့ဒီ ကျက်သရေမရှိတဲ့ကဒ်တွေကို မီးရှို့လိုက်တာ အကောင်းဆုံးပါ!
photo-.ပေးပို့လာသူ Bo Sein SeinShwe